CFM: 36 ireo mangataka famotsoran-keloka | NewsMada
CFM: 36 ireo mangataka famotsoran-keloka
“36 ny fangatahana famotsoran-keloka, ary voarain-dry zareo ao amin’ny Fitsarana tampony. Ry zareo no mandinika ny antontan-taratasy ary manome ny fanapahan-kevitra ara-pitsarana ny amin’izany.” hoy ny filohan’ny CFM, i Maka Alphonse, tamin’ny fanombohana fivoriana ara-potoana fahatelo fanaon’ny CFM teny Ampefiloha, omaly. Miandry ny fanapahan-kevitry ny eo anivon’ny fitsarana tampony ny CFM; avy eo, afa-mamaly ny fangatahana famotsoran-keloka.
1 300 ny fangatahana fanonerana sy fanarenana
Mahatratra 1 300 eo ho eo kosa ny isan’ireo fangatahana fanonerana sy ny fanarenana noho ny fahavoazana. Efa miasa ny vaomiera momba ny fanonerana sy ny fanarenana ary ny fahamarinana sy ny famelan-keloka. 100 mahery ireo antontan-taratasy vitan’ireo mpitandro filaminana.
Efa any amin’ireo tomponandraiki-panjakana ny amin’ny didy fampiharana ny lalàna ny amin’ny fananganana sy ny fampiasana ny Tahirim-pirenena ho amin’ny firaisankina ary ny amin’ny fombafomba momba ny fanonerana sy ny fanarenana.
Maromaro ireo fangatahana famatsiam-bola nataon’ny CFM. Nandefasana izany ny Pnud, ny OIF, ny masoivohon’ny Vondrona eoropeanina, ny masoivohon’i Sina sy i Afrika Atsimo ary i Maroc.